Halbeegga siyaasadda Puntland ee maanta iyo doorashada 2019 – Radio
December 29, 2018	95	Like
Puntland ayaa isku diyaarinaysa doorasho aad loo sugayo taas oo la filayo in ay dhacdo 8 bisha Janaayo ee sanadka kaabiga inagu haya ee 2019.
Doorashadan waa mid si aad ah uga duwan doorashooyinkii hore marka la barbar dhigo dhinacyada amaanka, dhaqaalaha,dowlad wanaagga iyo halbeegga daganaanshiyaha siyaasadda ee ay maanta Puntland ka taagan tahay.
Amaanka oo ah mid kamid ah tiirarka ugu muhiimsan ee ay ku taagan tahay dowlad waliba marka la eego Puntland iyadoo ay kamid tahay dowladaha ugu xasiloon ee xubnaha ka ah Federaalka lama oran karo waa 100% sababo jira awgood.
Dayaca amni ee ka jira magaalooyin ay kamid tahay Boosaaso waa qeyb ka mid ah dhaliilaha farta ku godaya doorashada Puntland ee sanadkan waxaana masuuliyadda ugu weyn dayacay madaxda maanta ee qaarkood ku jira musharixiinta u tartamaya doorashada oo madaxweyne Gaas uu ugu horeeyo.
Madaxweyne Gaas horey ayuu u balan qaaday in uu wax badan ka qabanayo dhinacyada amaanka iyo xoreynta deegaanada maqan balse taas cagsigeeda madaxweyne Cabdiweli ayaa doorashada Puntland galinaya xili wax ka yar 30 kiilo meter loo jiro caasimadda Puntland ee Garoowe isla markaana deegaanka Tukaraq ay weli gacanta ku hayaan ciidamada maamulka Somaliland marka laga reebo in ciidanka Puntland dhufaysyo ciidan ku leeyihiin aagaga dagaalka ee deegaanka.
Dayaca kale ee amni waa dilalka joogtada noqday ee haldoorka iyo ganacsatada har iyo habeen loogu geysanayo magaaladii mudnayd in ahmiyadda koowaad la siiyo sugidda amnigeeda (Boosaaso) taas oo haatan marin iyo marti u noqotay kooxo qowleysato isugu jira argagixiso iyo calooshood u shaqeystayaal kuwaas oo beegsi ka dhigtay maatada iyo dadka wax galka u ahaa bulshada Puntland,madaxweyne Gaas taasi ahmiyad iyo qorshe cad kama yeelan badalkeeda ayuu maanta qorsheeyey in uu markale hogaanka u qabto dadkii uu dayacay amaankooda.
Marka la eego Dhinaca dhaqaalaha Puntland wax isbedel ah kama sameyn shantii sano ee lasoo dhaafay sida kobcinta iyo sare u qaadista dakhliga dalka,mideynta canshuuraha iyo maareynta dhaqaalaha iyo miisaaniyadda guud ee Puntland,hase ahaatee taasi badalkeeda shanti sano ee lasoo dhaafay waxaa kordhay maamul xumida ,musuq maasuqa,hirgelin la’aanta isla xisaabtan dhab ah oo lagu korjogteeyo masuuliyiinta sarena loogu qaado heerka cadaalada iyo garsooreed ee dalka iyo ku faanka mashaariic dowladihii hore galeen mana muuqan talaabo ay ku faani karto Puntland-tii dhidibadda loo aasay 20-sano ka hor.
Qodobkan oo aan u baahnayn ka hadal badan maadaama uu ku jaango’an yahay qodobada kor ku xusan hadana marka lays dul taago waxa iska badalay shan sano oo Puntland ay jirtay lama oran karo halbeegii dhinaca positive-kaa ayuu gaaray ama waa uu guuleystay qodobada iyo qeexidda soo socdo awgood.
A) qaadashada go’aano aan laga talo-galin muwaadiniinta iyo dadkii majaraha u taagay dowladnimada Puntland.
B) Ku dhaqanka shuruucda iyo qaanunka oo gaabis ka noqday maamul jira muddo 20-sano,Tusaale:
3-dii bishan madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiin Xaaji Cumar Camey ayaa soo saaray digreeto uu ku magacaabay gudi uu ku sheegay xalinta khilaafaadka iyo ansixinta golaha wakiilada Puntland iyadoo maalmo un ka hor xiligaasi uu madaxweyne Gaas soo magacaabay gudigan hadaba ku dhaqanka iyo sareynta sharciga oo aanay labada masuul midkood ku dhaqmin ayaa keenay in ay kala magacaabaan labo gudi oo ka shaqeeya soo dhissida golaha wakiilada.
Dad badan ayay fajo-ciso ku noqotay arintan maadaama ay noqotay markii ugu horeysay tan iyo intii ay jirtay Puntland ay madaxweyne iyo ku xigeen talo wadaag ka noqon waayaan dhismaha gudigii xalin lahaa khilaafaadka golaha wakiilada Puntland.
4) Halbeegga dagaanshiyaha iyo xasiloonada siyaasadda
Xasiloonada waa mid kamid ah istaraatijiyada maamul wanaagga iyo hooska ama harka laga eego dowladnimada waana tiirarka ugu muhiimsan ee ay ku taagan tahay dowladnimada maxaa yeelay dowlad aan qaadan go’aaano aan laga eegin masiirka dadka ay iyo xasilinooda dalka waa hubaal in ay luminayso kalsoonida dadkeeda iyo tan amnigeeda.
Maanta oo 21sano ay Puntland ay u buuxsamayso aas-aaskeeda
Siyaasadii iyo shaxdii lagu socodsiinayey dowladnimadeeda wax badan oo qiyyam u ahaa ayaa lumay, waxaa dhamaaday kabihii dawladnimadu ku soconaysay ee horseedayay in ay miro-dhal ka dhigaan yoolkii loo aasaasay.
Puntland-tii 21-sano ka hor dhidibada loo taagay waxaa la dayacay oo cidla looga tagay gobolo/deegaano dadkii kasoo jeeda ay hormuud u ahaayeen dhismeheeda,waxaa la dayacay hab maamulkii iyo maamuskii dowladnimo oo Puntland kaga tilmaamneyd Soomaaliya inteeda kale.
Waxa ay taasi sababtay in Puntland-tii ahayd hooyadii Federaalka in ay dhexda ka fariisato maamulo curdun ah oo ay hogaan u noqoto khilaaf aan xalkeeda la baadigoobeyn lana bogaadin.
Hadaba intaas iyo inka badan oo aan lasoo koobi karin waxa ay dhaawaceen heykalkii dowladnimo ee Puntland hadaan xal loo helinna lama gaarayo himiladii lagu taamayay in lagu horumariyo dalka iyo dad reer Puntland.
In xal loo helo intaas oo caqabado iyo dhaawacii gaaray dowladnimada waxa ay ku xiran tahay sida ay shacab iyo madaxba ugu shaqeeyaan sidii siraadka saxa ah loogu hagi lahaa Puntland oo aanay noqon meel ay go’aan shakhsiyadeed ku gaaraan madax aan eegin rabitaanka dadka uu Alle (SWT) yiri ku hogaamiya dariiqa ku dhisan cadaalada iyo tashiga.
December 29, 2018	99	1
December 29, 2018	113	Like
Waxaa Qorey Raage Cabdulqadir Nin weyni waa qowlkii! Waxaan halkaan ku soo qaadanayaa 10 ballanqaad ...